Cliff House Degenaanshaha Usbuuca Dhammaadkiisa - Joornaalka Naqshadeynta
Degenaanshaha Usbuuca Dhammaadkiisa
Degenaanshaha Usbuuca Dhammaadkiisa Kani waa xero kalluumeysi oo leh muuqaal buuro ah, oo ku taal banka Cirka Jannada ('Tenkawa' oo ku taal Jabbaan). Ka samaysan la taaban karo oo la xoojiyay, qaabku waa tubo fudud, dhererkiisuna yahay lix mitir. Dhamaadka wadada dhinaceeda ayaa la culeys saarey waxaana lagu hayaa qoto dheer dhulka, si ay uga gaarto sagxadda bangiga oo ay biyuhu dul fidsan yihiin. Naqshaddu waa sahlan tahay, gudaha guduhu waa waasacantahay, oo dekedaha webigu u furan yihiin cirka, buuraha iyo webiga. Ka hoosaysa heerka wadada, kaliya saqafka qolka waxaa la arkaa, laga soo bilaabo wadada dhinaceeda, sidaa darteed dhismaha ma xannibo aragtida.
Magaca mashruuca : Cliff House, Magaca naqshadeeyayaasha : Masato Sekiya, Magaca macmiilka : PLANET Creations Sekiya Masato Architecture Design Office.
Degenaanshaha Usbuuca Dhammaadkiisa Masato Sekiya Cliff House